Ny Zavatra Hataon’ilay Fanjakana—Hovany ho Paradisa ity Tany Ity | Fanjakan’Andriamanitra
Efa Mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra!
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kwangali Kwanyama Laosianina Letonianina Lingala Litoanianina Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mooré Myama Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sena Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tigrigna Tiorka Tiv Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Tsy andrinao ve izay hanatanterahan’ilay Fanjakana ny fampanantenany?
Ny Zavatra Hataon’ilay Fanjakana—Hovany ho Paradisa ity Tany Ity
VOKATRA ny paoma ka mioty paoma ianao, ary nahazo be dia be. Mbola mahatazana paoma iray masaka be ianao, dia maka an’ilay izy. Mankafy kely ny fofony aloha ianao, vao mametraka an’ilay izy ao anaty harona. Efa elaela ihany ianao no nivezivezy teny, nefa tsy reraka mihitsy. Tazanao eo akaikikaiky eo ny mamanao. Falifaly erỳ izy mioty paoma sady miresadresaka amin’ny havanareo sy ny namanareo. Tsy mampino hoe lasa tanora indray izy, hoatran’ilay nahitanao azy tamin’ianao mbola kely. Mbola tadidinao mantsy hoe nihantitra izy, dia narary, dia lasa nahia kely. Nahita azy nanary aina tsikelikely koa ianao. Nitazona ny tanany ianao tamin’izay sady nitomany. Nitomany be koa ianao tamin’izy nalevina. Tantara anefa sisa izany, satria velona indray izy izao sady salama tsara. Ary tsy izy ihany fa olon-kafa be dia be koa.
Izany no ampanantenain’i Jehovah antsika, ary tena matoky isika fa hisy izany satria tanteraka foana izay lazainy. Ho hitantsika ato ny zavatra nolazainy fa hitranga alohan’ny Hara-magedona. Ho hitantsika koa hoe inona no hitranga aorian’izay. Hitondra eto an-tany ny Fanjakan’Andriamanitra, ka hanova azy ity ho Paradisa. Ho faly be isika amin’izay!
ITY FIZARANA ITY
Handringana ny Fahavalony Ilay Fanjakana
Inona no tokony hataonao dieny izao, raha te ho tafavoaka velona ianao amin’ny Hara-magedona?
Inona no Efa Ataon’ilay Fanjakana sy Mbola Hataony?
Nahoana isika no afaka matoky fa hanatanteraka an’izay rehetra nolazainy i Jehovah?
TOKO 1 “Ho Tonga Anie ny Fanjakanao!”
TOKO 2 Efa Manjaka any An-danitra Ilay Fanjakana
FIZARANA 1 Ny Marina Momba Ilay Fanjakana—Lasa Nahalala Tsikelikely Momba Ilay Fanjakana Isika
TOKO 3 Nampahafantarin’i Jehovah ny Fikasany
TOKO 4 Nanamasina ny Anarany i Jehovah
TOKO 5 Fantatra ny Marina Momba Ilay Fanjakana
FIZARANA 2 Ny Fitoriana Momba Ilay Fanjakana—Mitory Eran-tany ny Vahoakan’ilay Fanjakana
TOKO 6 Iza no Manao An’ilay Asa?
TOKO 7 Inona avy no Efa Nataontsika mba Hitoriana?
TOKO 8 Inona avy ny Fitaovana Ampiasaintsika mba Hitoriana Eran-tany?
TOKO 9 Inona no Vokatr’ilay Asa Fijinjana?
FIZARANA 3 Ny Lalàna ao Amin’ilay Fanjakana—Mankatò ny Lalàn’Andriamanitra Isika
TOKO 10 ‘Nanadio’ ny Vahoakany Ilay Mpanjaka
TOKO 11 Nihanazava ny Lalàn’Andriamanitra
TOKO 12 Vahoaka Voalamina Tsara
FIZARANA 4 Natao ‘Mafy Orina Araka ny Lalàna ny Vaovao Tsara’
TOKO 13 Niakatra Fitsarana ny Vahoakan’ilay Fanjakana
TOKO 14 Ny Fanjakan’Andriamanitra Ihany no Tohanantsika
TOKO 15 Nitaky ny Zony ny Vahoakan’i Jehovah
FIZARANA 5 Mampianatra ny Vahoakany Ilay Fanjakana—Ampiofanin’i Jehovah Isika
TOKO 16 Miara-mivory ny Vahoakan’ilay Fanjakana
TOKO 17 Ampiofanin’i Jehovah ny Mpitory Ilay Fanjakana
FIZARANA 6 Manohana An’ilay Fanjakana ny Vahoakany
TOKO 18 Avy Aiza ny Vola Ampiasaintsika?
TOKO 19 Trano Manome Voninahitra An’i Jehovah
TOKO 20 Mifanampy ny Vahoakan’ilay Fanjakana
FIZARANA 7 Ny Zavatra Hataon’ilay Fanjakana—Hovany ho Paradisa ity Tany Ity
TOKO 21 Handringana ny Fahavalony Ilay Fanjakana
TOKO 22 Inona no Efa Ataon’ilay Fanjakana sy Mbola Hataony?
Soratra Fandikana boky Efa Mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra!
Raki-peo Fandikana raki-peo Efa Mitondra ny Fanjakan’Andriamanitra!